चलचित्र Archives | Page5of 70 | Kendrabindu Nepal Online News
काठमाडौं । आजभन्दा ठीक एक महिना अघि वलिउड अभिनेता सुशान्त सिंह राजपूतले आत्महत्या गरेका थिए । सुशान्तको मृत्युको खबरले सबैलाई आश्चर्य चकित बनाएको छ । यो आघात उनकी प्रेमिका रिया चक्रवर्तीलाई सुशान्तको परिवार र प्रशंसकहरु जत्तिकै छ । सुशान्तको बिदाइ
३० असार २०७७, मंगलवार १८:३५	३० असार २०७७, मंगलवार १८:३५
‘दीपा दिदीले अपराधै गर्नु भएछ, अब छुट्ने बेला भएन ?’-जितु नेपाल
काठमाडौँ । कलाकार दीपाश्री निरौलाले महानायक राजेश हमाल बारे दिएको प्रतिक्रियाको चर्चा परिचर्चा अझै सकिएको छैन । दीपाश्रीले भन्न खोजेको कुरा जे भए पनि उनको बडील्याङ्ग्वेज ले गर्दा धेरैको गाली खानु पर्यो । धेरैले उनमा अहंकार बढेको आरोप पनि लगाई
३० असार २०७७, मंगलवार १६:४८	३० असार २०७७, मंगलवार १६:४८
आइसोलेशनमा अमिताभको दोस्रो दिन, छोडेनन् दैनिक तालिका
काठमाडौं । कोरोना भाइरस संक्रमित अमिताभ बच्चनलाई मुम्बईको नानावटी अस्पतालमा भर्ना गरिएको छ । उनको अवस्था सामान्य रहेको र आइसोलेशन वार्डमा भए पनि उनी आफ्नो दैनिक तालिकालाई निरन्तरता दिइरहेका छन् । उनी अझै पनि आफ्नो प्रशंसक, कलेज, पत्रकार र साथीहरुलाई
२९ असार २०७७, सोमबार १६:१७	२९ असार २०७७, सोमबार १६:१७
काठमाडौं । नायिका श्वेता खड्काद्वारा स्थापित श्वेताश्री फाउण्डेशनको अगुवाईमा सिन्धुपाल्चोकमा निर्माण भईरहेको एकिकृत माझी बस्तीमा शानदार सभा भवन बन्ने भएको छ । बहुउद्देश्यिय कार्यको लागि प्रयोग हुने सो भवन निर्माणमा अग्रवाल सेवा केन्द्रले साथ दिने भएको हो । सामुदायिक पुस्तक,
२९ असार २०७७, सोमबार १२:३५	२९ असार २०७७, सोमबार १२:३५
बलिउड अभिनेत्री ऐश्वर्यालाई पनि कोरोना पुष्टि
काठमाडौं । बलिउड अभिनेता अमिताभ बच्चन र अभिषेक बच्चनको कोरोना रिपोर्ट पोजेभिट आएपछि अभिषेकपत्नी अभिनेत्री ऐश्वर्या राय बच्चन र उनकी छोरी आराध्या बच्चनलाई पनि कोरोना पोजेटिभ देखिएको छ । यसअघि पहिलोपटकको परीक्षणमा जया बच्चनसहित ऐश्वर्या र आराध्याको रिपोर्ट नेगेटिभ आएको
२८ असार २०७७, आईतवार १८:२५	२८ असार २०७७, आईतवार १८:२५
दीपाश्री निरौलाको पक्षमा बोल्ने कलाकारहरु, कसले के भने ?
काठमाडौं । कलाकार तथा चलचित्र निर्माता, निर्देशक दीपाश्री निरौलाले एक कार्यक्रममा राजेश हमालको ‘महानायक’को उपाधीमा प्रश्न उठाएकी थिइन् । त्यसपछि सामाजिक सञ्जालमा उनीमाथि गालीको ओइरो लागेको छ । यस विषयमा सञ्चार माध्यम तथा सामाजिक सञ्जालमा बहस भइरहेको छ । यस
२८ असार २०७७, आईतवार १८:१०	२८ असार २०७७, आईतवार १८:१०
२८ असार २०७७, आईतवार ०६:४७	२८ असार २०७७, आईतवार ०६:४७
दिपाको समर्थन केकीलाई भारी, आलोचनाको शिखरमा अभिनेत्री अधिकारी
कोभिड १९ को कारण थलिएको देश विगत केहि महिनादेखि लक डाउनको अवस्थामा छ । देश नै सुनसान भएको अवस्थामा पनि कहिले राजनीति क्षेत्र त कहिले कला क्षेत्रका केहि विषयहरुले सामाजिक संजाल निकै ततायो । यहि भाइरल विषयहरु मध्येको एउटा विषय
२७ असार २०७७, शनिबार १६:४४	२७ असार २०७७, शनिबार १६:४४
काठमाडौं । महानायक राजेश हमालले आफ्नो २५ वर्ष लामो अभिनय यात्राले नै नेपाली चलचित्र उद्योगको आधार तयार गरेको हुँदा पछिल्लो समयमा आएर आफ्नो आलोचना गरिनु हाँस्यास्पद रहेको बताएका छन् । उनले भनेका छन्, ‘मेरो करियरको सुरुवातमा नेपाली चलचित्र उद्योगको जुन
२७ असार २०७७, शनिबार १५:०३	२७ असार २०७७, शनिबार १५:०३
काठमाडौं । कोरोना भाइरसले सर्वसाधरणको जीवनमा कस्तो प्रभाव पा¥यो त ! अहिले नै यसले पु¥याएको असर र प्रभावका बारेमा निर्णय लिने अवस्था छैन । यद्यपि हरेक वर्गको जनजीवनमाथि यसको प्रभाव हावी देखिन्छ । विश्वमा भाइरस प्रभाव सुरु भएको ७ महिना
२६ असार २०७७, शुक्रबार १८:०९	२६ असार २०७७, शुक्रबार १८:०९
कोरोना भाइरसको असर र लकडाउनले चलचित्र उद्योगका गतिविधी ठप्प रहे पनि गसिप र विवादका विषय भने यतिबेला चर्चामा छन् । त्यसमा पनि केही समय अघि एक टेलिभिजन अन्तर्वार्तामा कलाकार तथा निर्देशक दीपाश्री निरौलाको कटाक्ष संवाद यतिबेला भाइरल बनेको छ ।
२२ असार २०७७, सोमबार १४:१३	२२ असार २०७७, सोमबार १४:१३